Zadza Rondedzero Yezvikanganiso Nekuda kweMS Excel Faira Uori
musha Products DataNumen Excel Repair Zadza Rondedzero Yezvikanganiso
Zadza Rondedzero Yezvikanganiso Nekuda kweMicrosoft Excel Faira Uori
Paunoshandisa Microsoft Excel kuvhura yakashata Excel xls kana xlsx faira, uchaona akasiyana mhosho mameseji, izvo zvinogona kunge zvichikanganisa kwauri. Naizvozvo, pano isu tichaedza kunyora zvese zvingangoitika zvikanganiso, zvakarongedzwa zvichienderana nekuwanda kwavo kuitika. Unogona kushandisa yedu Excel kudzoreredza chishandiso DataNumen Excel Repair kugadzirisa iyo yakashata Excel faira. Pazasi isu tinoshandisa 'filename.xlsx' kuratidza yako yakaipa Excel faira zita.
Excel haigone kuvhura iyo faira 'filename.xlsx' nekuti iyo faira fomati yekuwedzera iyo faira haishande. Tarisa uone kuti iyo faira haina kushatiswa uye kuti iyo faira yekuwedzera inoenderana nemhando yefaira. (Kukanganisa 101590)
Excel haigone kuvhura iyi faira. Iyo fomati fomati kana kuwedzerwa kwefaira hakushandi. Tarisa uone kuti iyo faira haina kushatiswa uye kuti iyo faira yekuwedzera inoenderana nemhando yefaira.
Iyo faira yakaora uye haigone kuvhurwa.
Excel faira haisi mune inozivikanwa fomati.
Excel yakawana zvemukati zvisingaverengeki mu .
'filename.xls' haigone kuwanikwa. Iyo faira inogona kuverengerwa-chete, kana iwe ungave uchiedza kuwana iyo yekuverenga-chete nzvimbo. Kana, iyo server iyo gwaro rakachengetwa pairi inogona kunge isiri kupindura.
Microsoft Excel yamira kushanda.
Mushanduri akatadza kuvhura iyo faira.
Mushanduri anodikanwa kuvhura iyi faira haigone kuwanikwa.
Tawana dambudziko nezvimwe zvirimo mu 'filename.xlsx'. Iwe unoda here kuti isu tiedze kupora nepatinogona napo? Kana iwe ukavimba kunobva bhuku rino rebasa, tinya Yes.
Tine urombo, hatina kuwana filename.xlsx. Zvinoita here kuti yakafambiswa, kutumidzwazve zita kana kubviswa?